Nidaamka ku cadaadisaa video ah oo guud ahaan ka mid ah resizing ah dhinacyada video, hoos size jir ah iyo heerka qayb galka video ah. Yaraynta video clip la Apple ee QuickTime Player baahan iibsan version update loo yaqaan QuickTime Pro (tan iyo edition Free of QuickTime Player ma ogola u compressing ama Brøndby video) oo socda iyada oo ay habka dhoofinta kartoo.
Talaabooyinka soo socda ayaa loo baahan yahay si ay u qabtaan riixo video ah oo la isticmaalayo QuickTime Player Pro:
Tallaabada 1. Download QuickTime oo la casriyeeyo si version pro
Download QuickTime Pro ka this site iyo Ogolaado shuruudaha isticmaalka iyo ku rakibi at your computer. La soo iibiyo liisanka waxaa loogu tan iyo dhoofinta iyo video riixo menu waxaa karti u version of bixisay ciyaaryahankani. Dooro sii daayo software ku salaysan nidaamka hawl gal sababtoo ah waxaa jira laba nooc oo kala duwan oo la sii daayo ganacsi ah, iibso, waayo, Windows iyo iibso, waayo, Mac.
Tallaabada 2. Ku dar files barnaamijka
In tallaabadaas, user aado "File" Menu oo guji "File Open" inuu u ciyaaro video clip ah. Markaas suuqa kala browser file a furi doonaa si ay u doortaan file video kasta. Hadda, waxaad isticmaali kartaa si aad file iyo furi video ah oo lagu ciyaaro waxa ay ku. Video waxaa loo isticmaali doonaa sida ra'yigooda video hawlgalka cadaadi.
Tallaabada 3. nidaameed codka la video ah
Play aad filim iyo in la hubiyo in codka syncs la video ah. Haddii codka bilaabo goor hore waxaad u baahan kartaa in aad ku darto qaar ka mid ah filler audio bilowga si ay u helaan in ay u hagaagsan, kaas oo si fudud lagu sameeyey barnaamij kale oo aan ahayn gudahood QuickTime.
Marka audio iyo video yihiin synced aad diyaar u tahay inay u dhoofiyaan faylka loo isticmaalo internetka.
Tallaabada 4. dhoofinta video ah
Riix ah "File" tab iyo dooro "Dhoofinta" in la furo "File badbaadi dhoofiyo Sida" ee shaashadda. Hadda riix "Dhoofinta" doorasho hoose ee menu iyo dooro "Movie in QuickTime Movie" ikhtiyaarka u audio iyo video goobaha.
Tani waxay keeni doontaa in qaybta soo socota, halkaas oo waxaad geli kartaa magaca cusub ee file filim cusub soo saaray. Fadlan guji "Options" badhanka hoose u audio iyo video goobaha.
Tallaabada 5. Change goobaha
Ka dib markii riixaya badhanka "Options" ee shaashadda soo socda ayaa iman doona. Halkan, waa in aad bedesho goobaha ay ka yar "Video" iyo "Sound" xulitaanka riixo ku ool ah.
Tallaabada 6. Change nooca riixo ah
Hadda dooro "Settings" button in la beddelo "nooca riixo" aad video mid ka mid leh tirada yara yar. Yaraynta size video uu leeyahay waxoogaa yar oo tayo leh muuqaal ah oo mugdi ah. Waxaa la cadeeyo ma si sax ah oo wax ku ool ah oo ku saabsan goobaha in doonaa mid video tayada sii joogi doonaan isla file kale video ka dib markii riixo. Video soo socda loo dejiyay waxaa laga codsadaa sida upka loogu riixo H.264.
Si aad u bedesho dhinacyada video iyo jir cabbirka, riix "Size" button oo dooro mid ka mid ah fursadaha xigtaa hoose. Kuwa soo socda goobaha video halkan loo isticmaalo:
Habka: 2-Pass VBR
Jire Size: 576 432H W
Aragti Saamiga Xulashada: Ku hay muuqa
Rate jir ah: 1: 1 jir ah / Sec
Key loox: 100 looxyada
Wixii qaybta Audio, isticmaal faahfaahinta soo socota:
Guji "OK" labo jeer in ka bixidda goobaha iyo dib u "File badbaadi dhoofiyo Sida" ee shaashadda. Geli magaca cusub ee ahbaa file Tifaftirayaasha oo dhigay meel ku drive computer adag u badbaadin.
Riix badhanka "badbaadi" si ay u bilaabaan compressing iyo dhoofinta video ah.
Tusaalaha kor ku xusan, baaxadda file asalka ah waa 300 MB oo la cadaadiyo hab riixo H.264. Laakiin waxaa jira qaar ka mid ah codec kale ee compressing file video kasta. Riixo Audio si wax ku ool ah marka loo eego hoos u size ma noqon doonto. Halkan, falanqayn is barbardhigga codec kala duwan waxaa lagu bixiyay file asalka isku mid ah. Dhammaan gaadmada ah oo tayo leh waa gaadmada ah caadiga ah, isla xigtaa, iyo heerka jir waa la hayaa iska beddelin sidii filimka qabtay asalka, loox muhiimka ah ayaa lagu wadaa in si toos ah loogu falanqaynta.
191,02 Kbps 1,03 MB Waa codec caadiga ah isgaarsiinta video iyo riixo.
163,11 Kbps 904,92 KB Waxaa dhawaan la soo bandhigay codec u QuickTime Pro 7. In la yareeyo xajmiga si hufan.
256 Kbps 1.38 MB Waxaa si weyn loo isticmaalo codec. Tayada Tifaftirayaasha video la aqbali karo oo cad. Si kastaba ha ahaatee haddii aan barbar dhigtaa H.264, size faylka (encoded in Sorenson Video 3) oo ku saabsan 56% in ka badan file isla encoded in H.264 yahay.
MPEG4 (asaasiga ah)
68,18 Kbps 378,21 KB Tayada aan la aqbali karin. Video waxaa encoded in heerka qayb aad u yar yahay.
277,83 Kbps 1.5 MB Tayada video of this MPEG 4-waa haban. MPEG-4 farsamo codec waa cusub ka badan Sorenson Video 3. Waxay hubisaa oo tayo leh iyo in sicirka sare laakiin size Tifaftirayaasha waa qayb yar oo sare loo eego.
QuickTime ma shaqeeyaan Mountain Libaaxa? Resovled (Mavericks taageerayaan)
> Resource > QuickTime > Sidee ku cadaadisaa Video ah oo la QuickTime Player Pro